बास्तविकता बाहिरियो ! सबिताका श्रीमान र ससुराको कसैले नसोचेको यस्तो कुरा सुनाइन दिदीले ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
बास्तविकता बाहिरियो ! सबिताका श्रीमान र ससुराको कसैले नसोचेको यस्तो कुरा सुनाइन दिदीले ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
June 7, 2021 June 7, 2021 AdminLeaveaComment on बास्तविकता बाहिरियो ! सबिताका श्रीमान र ससुराको कसैले नसोचेको यस्तो कुरा सुनाइन दिदीले ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै र न’राम्रा घ’टनाहरु नेपालमा घ’टिरहेका छन् । आफ्नै ससुराले बुहारीको गो.प्य अ’ङ्गमा छुने जस्ता न’राम्रा हर्कत गरेका भिडियोहरु एका एक मिडियामा आइरहेका छन् । परिवार भित्रै अ’सुरक्षित बनेका छन् नेपालमा महिलाहरु भन्दै धेरैले यस घ’टनाको वि’रोध गरेका छन् ।
आफ्नै बुहारी माथि कु’दृष्टि लगाउने ससुरालाई देशव्यापी रुपमा कडा का.रबाहीको माग भइरहेको छ । यद्यपि घ’टना निकै र’हस्यमय रहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । के हो त वास्तविकता त्यो आउन बाँकी नै रहेको छ । सबिता भण्डारीको माइतीपक्षले ह त्या नै गरेको हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन् ।
घ’टनाको प्रकृति हेर्दा आफै गरेको आ.त्मह.त्या होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुले चौतर्फी वि’रोध गर्दै आएका छन् । बुहारीलाई ससुराले छोरीको रुपमा हेर्नु पर्ने तर आफ्नै छोरी समान बुहारीलाई पटक पटक दु.र्व्यवहार गरेपछि सहन नसकेर यस्तो भएकाे भन्ने अड्कल पनि धेरैले गरेका छन ।
सबैले आफ्नो आफ्नो धारणा राखिरहेका छन । यो विषयलाई लिएर सबैले पि’डित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लागि परेका छन । यसै क्रममा आज दिदी बहिनी आ’क्रोशित हुँदै मिडियामा आएका छन । उनीहरुले सुरुदेखिको सम्पूर्ण नालीबेली बताएका छन् । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः
यो हप्ताको राशिफल हे’र्नुहोस् : जेठ २३ गते आईतबारदेखी जेठ २९ गते शनिबार सम्मको……